Imekọ ihe n'ịntanetị IWCA – International Association Centers Writing Association
Mmekọrịta: Maachị 9, 2022
1:00-5:00 ehihie EST
Gaa na Saịtị ndị otu IWCA ịdebanye aha
A na-akpọ gị ka ị nyefee atụmatụ maka mmekorita IWCA Online-Oku maka atụmatụ dị n'okpuru. Ka anyị na-aga n'ihu na-alụso ọrịa a ọgụ na mmetụta ya na ọrụ anyị na ọdịmma anyị, anyị na-atụ anya na ụbọchị a ọnụ ga-enye anyị nchekwube na ike, echiche na njikọ.
Na ọkpụkpọ oku ya na Mgbakọ Kwa Afọ 2022 CCCC, Onye isi oche Mmemme Staci M. Perryman-Clark na-akpọ anyị òkù ịtụgharị uche n'ajụjụ a, "Gịnị mere i ji nọrọ ebe a?" na ịtụle echiche nke ịbụ nke anyị na ụmụ akwụkwọ anyị nwere ike ma ọ bụ enweghị ike inwe na oghere anyị.
Ka anyị na-aga n'ihu n'ọrịa COVID19 nke nwere anyị, na-emegharị ọgbakọ ogbako ọzọ n'ịntanetị, ike gwụrụ site na ozi na-ekwekọghị ekwekọ na nke na-emegiderịta onwe ya na atumatu gburugburu masking, ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, na ịrụ ọrụ site n'ụlọ — kedu ka anyị ga-esi zaa òkù Perryman-Clark ka ọ guzogide, ịlanarị , ime ihe ọhụrụ, na ime nke ọma? Olee otú anyị si ekere òkè na “ọrụ obi ike [nke] dị oké egwu na nke na-aga n'ihu”? (Rebecca Hall Martini na Travis Webster, Ụlọ Ọrụ Ide ihe dị ka Oghere Obi Ike/r: Okwu Mmalite Pụrụ Iche Nyocha Ọgbọ, Mpịakọta nke 1, mbipụta 2, Fall 2017) N'ime usoro ọhụrụ nke ngwakọ, online, mebere, na nkuzi ihu na ihu, kedu ka oghere na ọrụ ederede ga-esi nọgide na-emeghe nye ụmụ akwụkwọ niile? Maka mmekorita n'ịntanetị nke 2022 IWCA, a na-akpọ atụmatụ iji ajụjụ ndị a dị ka bọọdụ mmiri.
Kedu ka ọrụ ikpe ziri ezi si dị na ụlọ ọrụ anyị? Ònye na-eche na a kpọrọ òkù n'ime oghere anyị na onye na-adịghị? Kedu ihe anyị na-eme iji hụ na ndụ nke ndị ọrụ anyị, ụmụ akwụkwọ anyị na-eje ozi? Kedu ihe anyị na-eme karịa ịlanarị, kama ime nke ọma?
Na mmekorita n'ịntanetị nke 2022 IWCA, anyị na-akpọ atụmatụ maka nnọkọ na-elekwasị anya n'ịkwado ibe ha n'ichepụta na nnwale, na-elekwasị anya na usoro, ọ bụghị ngwaahịa, nke nyocha. Oge kwesịrị ime otu ma ọ bụ karịa n'ime ihe ndị a:
Kpọọ ndị sonyere gị ka ha tụgharịa uche, chepụta echiche, ma ọ bụ mepụta echiche maka mpaghara / ntụzịaka nwere ike ide nyocha etiti gbasara nsonye.
Na-eduzi ndị otu ibe anyị ụzọ ha ga-esi jiri nyocha etiti na-ede ederede iji wepụta oke ọrụ anyị na-arụ nke ọma, na-eme ka akụkọ anyị na-adọrọ mmasị ọtụtụ ndị na-ege ntị anyị na-etinye n'ime na karịa ntọala ụlọ ọrụ anyị.
Kwado ndị sonyere gị ka ha chepụta ihe ọhụrụ n'ime nchọpụta etiti ederede, gụnyere imegide adịghị ike ma ọ bụ okwu metụtara nwoke, ndị ọcha, ndị nwere ike na omenala colonialist na ụlọ akwụkwọ mmuta.
Kekọrịta ọrụ na-aga n'ihu maka nzaghachi sitere n'aka ndị ọkachamara na ndị nkuzi ụlọ ọrụ ide ihe ndị ọzọ
duzie ndị sonyere n'ụzọ anyị nwere ike ịtụgharị ezi ebumnuche ha gbasara nsonye na mgbochi ịkpa ókè agbụrụ ka ọ bụrụ usoro doro anya maka ime ihe.
duzie ndị sonyere ka ha chepụta ma hazie ka oghere etiti ederede anyị, usoro na/ma ọ bụ ozi nwere ike isi gbanwee ka anyị na-atụgharị ka COVID si emetụta ebe ọrụ anyị
Kpọọ ndị sonyere ka ha wepụta atụmatụ mmemme iji guzogide, ịdị ndụ, imepụta ihe ọhụrụ, na ime nke ọma
Enwere ike ịsị na ike nke ubi anyị bụ ọdịdị imekọ ihe ọnụ-anyị na-akpọ ndị sonyere ka ha bịakọta ọnụ iji mee ka nghọta nke onwe anyị sikwuo ike nke-na itinye aka na-iche, nha anya, na nsonye n'ebe ọ bụla ebe a na-ede ihe dị.
N'ihi na Njikọta bụ maka ịkwado ibe ha n'ichepụta na nnwale, atụmatụ kwesịrị ilekwasị anya na usoro, ọ bụghị ngwaahịa, nke nyocha; anyị echekwala otu usoro pụrụ iche - "Data Dash" - maka ọnụ ọgụgụ dị nta nke atụmatụ na-elekwasị anya n'ịkekọrịta nchọpụta nyocha. Atụmatụ niile, n'agbanyeghị usoro ọ bụla, kwesịrị ịgbalị ịmalite ọrụ ahụ n'ime akwụkwọ ọgụgụ isi na/ma ọ bụ akwụkwọ mmụta sitere na ọzụzụ ndị ọzọ.
Ụlọ ọrụ (nkeji 50): Ndị nkuzi na-edu ndị sonyere n'ọrụ aka, ahụmịhe iji kuzie nka ma ọ bụ atumatu metụtara ide nyocha etiti. Atụmatụ ogbako ga-aga nke ọma ga-agụnye oge maka iji echiche usoro egwu egwu ma ọ bụ ịtụgharị uche maka ịdị irè nke ọrụ ma ọ bụ nkà enwetara (mkparịta ụka buru ibu ma ọ bụ obere, nzaghachi ederede).
Oge okirikiri (nkeji 50): Ndị nkwado na-eduga mkparịta ụka nke otu okwu metụtara nyocha etiti ide; Usoro a nwere ike ịgụnye okwu mkpirisi sitere n'etiti ndị na-egosi 2-4 na nsonye na-arụsi ọrụ ike na ntinye aka na ndị bịaranụ kpaliri ajụjụ nduzi.
okirikiri ọdịde imekọ ihe ọnụ (nkeji 50): Ndị nkwado na-eduzi ndị sonyere na mmemme ide otu ezubere imepụta akwụkwọ ma ọ bụ ihe ejikọtara ọnụ iji kwado nsonye.
Mkparịta ụka gburugburu Robin (nkeji 50): Ndị nkwado na-ewebata otu isiokwu ma ọ bụ isiokwu ma hazie ndị sonyere n'ime obere ndị na-agbawa agbawa ka ha gaa n'ihu na mkparịta ụka ahụ. N'ime mmụọ nke asọmpi ''round robin'', ndị sonyere ga-agbanwe otu ma nkeji iri na ise ga-agbatị ma gbasaa mkparịta ụka ha. Mgbe mkparịta ụka opekata mpe agba abụọ gachara, ndị nhazi ga-akpọghachite otu zuru ezu maka mkparịta ụka mmechi.
Ihe ngosi Dash data (nkeji 10): Wepụta ọrụ gị n'ụdị 20 × 10: slide iri abụọ, nkeji iri! Nhọrọ ọhụrụ a na nnọkọ akwụkwọ mmado na-enye ebe dabara adaba maka nkenke, okwu ndị na-ege ntị n'ozuzu yana ihe ngosi anya. Dash Data dabara nke ọma maka ịkọ akụkọ nyocha ma ọ bụ dọta uche na otu mbipụta ma ọ bụ ihe ọhụrụ.
Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-aga n'ihu (nkeji 10 max): Oge na-arụ ọrụ na-aga n'ihu (WiP) ga-abụ mkparịta ụka okirikiri ebe ndị na-eme ihe ngosi na-ekwurịta okwu nkenke maka ọrụ nyocha ha ugbu a wee nweta nzaghachi site n'aka ndị nchọpụta ndị ọzọ gụnyere ndị isi mkparịta ụka, ndị ọzọ na-egosi WiP, na ndị ọzọ na-aga ogbako ndị nwere ike ịbanye na mkparịta ụka ahụ.
Ntinye akwụkwọ: February 20, 2022
Iji nyefee atụmatụ na ịdebanye aha maka Mmekọrịta, gaa na https://iwcamembers.org.
Ajụjụ? Kpọtụrụ ọgbakọ otu n'ime oche, Shareen Grogan, shareen.grogan@umontana.edu ma ọ bụ John Nordlof, jnordlof@east.edu.